Maalinta weyn ee ‘Ciiddul Adxaa’ oo loo ciiddayo! | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maalinta weyn ee ‘Ciiddul Adxaa’ oo loo ciiddayo!
Maalinta weyn ee ‘Ciiddul Adxaa’ oo loo ciiddayo!
Maanta oo sabti ah ayaa si weyn la isugu soo baxay loona xusay mid ka mid ah munaasabaddaha muhimka u ah muslimiinta caalamka ee ‘Ciiddul Adxaa’ waxaana inta badan dalalka Islaamku ay u dabbaaldegayaan munaasabaddaasi, iyada oo shalay xujeydu ay dhammaantood u wada taagnayeen ‘Banka Carafo’ gudashada Xajka.
Dhinaca kale, Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka sida weyn sannadkaan looga ciidday waxaana dadweynaha oo laga dareemayay farxad ay markii danbe ku tukadeen masaajidyo kala duwan oo ku yaala Muqdisho iyo gobollada kale ee waddanka waxayna intooda badan kaddib salaaddahaasi ay sameeyeen xoolo qalis iyo dabbaaldegyo waaweyn oo lagu xusayo ciidda.
Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, ku simaha madaxweynaha ahna afhayeenka barlamaanka, Maxamed Sheekh Cusmaan ‘Jawaari’ oo madaxda dawladda ee labada gole iyo shacab kale kula tukaday masaajidka Isbaheysiga Islaamka ayuu ugu hambalyeeyay dhammaan Soomaalida munaasabadda ‘Ciiddul Adxaa’ wuxuuna ALLE uga baryay in uu horumar iyo baraare ku gaarsiiyo sannadkaan kiisa kale sidoo kalena uu ka dulqaado dhibaatooyinka imminka haysta.
Bahda warbaahinta Xaqiiqa Times – madax iyo shaqaalaba – waxay Muslimiinta caalamka guud ahaan gaar ahaan Soomaalida ay lee yihiin ciid wanaagsan.
Previous articleBaraawe oo dhaqdhaqaaq ciidan laga dareemayo
Next articleBaraawe oo ciidamadda isbaheysigu la wareegeen